April 2010 | ချစ်ကြည်အေး
မြစိမ်းတောင်တောရ ဖားအောက်တောရ SMC
5.12.13 ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ကားပါမစ်ကိစ္စဘားအံကညနရုံးတွးင်စာရင်းစစ်ကန့်ကွက် ချက်ကြောင့်ပျက်သနာအချို့ဘယ်လိုဖုန်းရမည်မသိဖြစ်နေပါသည်။ စာရင်းစစ်ကလည်းကားဘယ်ကနေ၀င်လာ...
ပေါက်ပေါက် ရှာရှာ လေ့လာ တွေ့ရှိမှု များထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ယင်းကတော့ ဖုန်းနဲ့ Message ရိုက် ပို့ခြင်းဟာ ဥာဏ်ကောင်း စေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ အဖြစ်က ဒီလို...
*နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ် ဘာကိုလိုချင်တာလဲ?*
တနေ့က ဖဘ မှာ သူငယ်ချင်းတယောက် သူ့ဘဝရဲ့အရေးကြီး ကိစ္စ နဲ့ ခေါင်းစားနေကြောင်း စတေးတပ်စ် တင်လာပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း...
♪♪♫♪ ♫ ♪ ♫ ♪♫ သိသလိုမသိသလိုပါပဲ ပန်ဆင်သူမရှိလဲ အချိန်တန်ရင် ပန်းကတော့ ပွင့်နေမှာပဲ..… အပိုတွေကို မဆိုတတ်ဘူး သာမာန်လူတစ်ယောက်မို့လေ …တကယ်ပါမေရယ် ကိုယ်ကတော့ ...
အမျိုးသားများနှင့် စိတ်ကျရောဂါ အမျိုးသားတွေဟာ ကိုယ်ကာယ သန်မာသလို စိတ်ဓါတ်လည်း ခိုင်မာတယ်၊ စိတ်ခံစားမှုကိုလည်း ချုပ်တီးထားနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်လို့ လူတိုင်းလိုလ...
တရံရောအခါက မိစု ခေတ်ပျက်ကြီးထင်ပါရဲ့ဗျာ။ သေနတ်မျိုးစုံကလည်းအတော်ပေါဆိုပဲ။ နဂိုကတည်းက ဇမသေးတဲ့အဖေဟာ ...
မောငျဝါဝါနှငျ့ you can do it ဇှဲကပငျ
*မောငျဝါဝါနှငျ့ you can do it ဇှဲကပငျ*
- သူရဿဝါ - ဟိုတဈရကျတုနျးက သူငယျခငျြးတှေနဲ့အတူ ဘားအံ၊ ဇှဲကပငျတောငျကို မောငျဝါဝါ ခရီးသှာွးဖဈတယျ။ သိပျသှားခငျြတဲ့ ...
hunter game နာမည်ကြီးလွန်းလို့ကြည့်သည်. ကိုယ့်အလိုအရဆိုလျှင်မကြည့် မျှားတွေ ဘာတွေ ပါလာလျင် ရှေ့းဟောင်းကားနင့်တူသည် ခေတ်ဆန်ဆန်လေးမှ ကြည့်လိုသည်။ ဘယ်တတ်...
ညီမဝမ်းကွဲ မင်္ဂလာဆောင်သွားခါနီးတွင် ဗာဂျီးနီးယားဝုဖ်ရဲ့ ဝတ်စုံသစ်ဝတ္ထုတိုထဲက ‘ ပန်းကန်လုံးနံရံကို တွယ်တက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ယင်ကောင်တွေ’ ဆိုတဲ့ စကားကို အမှ...
ချိုချိုမြမြ ဒီဇင်ဘာမှာ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး တရားဓမ္မရိပ်..မိဘရင်ခွင်ရိပ်မှာ
အေးချမ်းစွာ ခိုလှုံနှိုင်ဖို့ အတွက် ဒီလ စာအုပ်အသစ်ကလေး စောစောထွက်ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က သူရောက်မလာခဲ့ဘူး...။
ဆောင်းပျောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဆောင်းအ၀င်မနက်ခင်း နေခြည်ပူနွေးနွေးမှာ....
စာအုပ်လေး တစ်အုပ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါ…။ စကားဝါပန်းတို့ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ စာမျက်နှာများ လို့ အမည်ရပါတယ်...။ ကိုကိုးအိမ် (မန္တလေး) စီစဉ်တဲ့ ဒီစာအုပ်လေးမှ...
ကျမ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားနေလေ့ရှိတာကတော့ ၀လို့ လှလို့ ၊
ကျန်းမာဝဖြိုး လို့ စသဖြင့် ပြည့်ပြည်ဖြိုးဖြိုး၀၀ လှလှ ကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့
စကားတွေပါ။ ကျမ အလုပ်မှာ နေ့ စဉ်...
*အကျွနု်ပ်၏ facebook status 2nd Dec 2013*
အိမ်ခန်းဈေးနှုန်းတွေကို လေးရက် လေ့လာလို့အပြီးမှာ မြေမရှိဘူးဆိုတဲ့ စင်ကာပူက ဈေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ အိမ်တွေကတောင် မြန...
ဒီဇင်ဘာဟာ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေနဲ့ တိတ်ဆိတ်နေတယ်
ဒီဇင်ဘာဟာ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေနဲ့ တိတ်ဆိတ်နေတယ် ။ အိပ်မက်တွေကို ချိပ်ပိတ်ပြီး
နှလုံးသားကို တံဆိပ်ကပ်ထားတယ် " ပြန်လည်မတူးဖော်ရ " ။
ကလောရောက်ပြီး နောက်တစ်ရက်နေတော့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ထွန်းထွန်းနဲ့မော်တို့ ဖွင့်ထားတဲ့ဆင်စခန်းကို သွားလည်ကြတယ်၊ ကလောဇာတိဖြစ်တဲ့ ထွန်းထွန်းက ငယ်ငယ်လေးကတည်း...
လွန်ခဲ့တဲ့အပတ် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ကြသပတေးနေ့ က ဖေ့တူဖေ့ အင်တာဗျူးဖို့နယူးယောက်မြို့ ကို ရောက်ခဲ့တော့ ဒီတောလားလေး ရေးဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့ဖုန်းအင်တာဗျူးအော...
သွားတော့ နို ၀င် ဘာ
အတိတ်ရဲ့ ၀တ်ရုံထူထူကို ခွာချပြီး..... နင်ထွက်သွားပါတော့
နင့်ရဲ့ ၀ိညာဉ်ထဲ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ရှိတယ်
နင့်ရဲ့ ၀တ်ရုံထဲ စက်တော်ရာမီးထွန်းပွ...
ဒူဘိုင်းမှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲက ပါတ်စ်ပို့စ်သက်တမ်းတိုးဖို့ မေးလာကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒီပို့စ်လေးကို ရေးပါတယ်..
နိုဝင်ဘာလဟာ အဖေနဲ့ အမေရဲ့ အမှတ်တရတွေ ပြည့်လွှမ်းနေတဲ့ လတလပေါ့။ အမေတို့ရဲ့ မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်ဟာ ဒီနိုဝင်ဘာမှာ ၄၉ နှစ်ပြည့်ပြီလေ။ တချို့သောသူတွေက အမှတ်တရ နေ့...
ကျင့်သားရနေတဲ့ မျက်စိနှစ်လုံး ပွင့်လာတော့ လင်းကြက်တောင် မတွန်သေး။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်က တိတ်ဆိတ်လို့နေသည်။ အိပ်ရာမှ အသာထကာ ခြေဖျားထောက်ပြီး ခပ်ဖွဖွ နင်းလေ...
ဘန်ကောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေပေမယ့် ကိုယ့်မှာ ရေပေါ်ဈေး မြဘုရား ကိုရောက်ဖူးပြီလားမေးရင် ဟင်အင်းလို့ဖြေရမှာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာလောက်ပဲရှိတယ် ရောက်ကတည်းက အလုပ်ရ...
ဒီနေရာလေးကနေတကယ်တမ်းပြောင်းရွှေ့ရတော့မဲ့အချိန်နီးလာတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာနှမျောမိသလိုခံစားရသည်။ မလွမ်းတတ်တဲ့ကိုယ်က ဒီနေရာလေးကနေပြောင်းရွှေ့သွားပြီးတဲ့အခါ ရင်ထ...
တစ်နေ့က စာမေးပွဲဖြေအသွား ဇွန်စီးလာတဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ အမှတ်မထင် မျက်လုံးထောင့်စွန်းက ရိပ်ခနဲ ဖျတ်ပြေးသွားတဲ့ ရွှေရောင်ဆံပင်နောက် လိုက်ကြည့်မိတဲ့အခါ ကားဘယ်ခြမ...
Number of View: 509အခုတလော PEN Myanmarနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေက စာရေးသူတွေ၊ စာချစ်သူတွေအကြား ဟိုနားတစ်စ၊ သည်နားတစ်စနဲ့ ပျံ့နေခဲ့ပါတယ်။ ပရင့်မဂ္ဂဇင်းတွေ ဂျာနယ...
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဖိလစ်ပိုင်မှာ အင်မတန်မှ ပြင်းထန်တဲ့ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်သွားခဲ့တယ်။ ရုံးကဖိလစ်ပင်းမလေးကို မုန်တိုင်းသတင်းမေးတော့ “ လူတွေအများကြီးေ...
အိမ်အပြင်ဘက်တွင် မိုးစလေးများ တဖွဲဖွဲနှင့်။ တစ်ညလုံးရွာပြီးသော်လည်း မတိတ်နိုင်သေး။ ကြည့်ရတာ တနေကုန် စွေမည့်ဟန်။ စနေဆိုတော့ ပိုဆိုးသည်။ စနေမိုးက စွေပါဘိသနဲ့...
တက်ညီလက်ညီ ဓလေ့ (2013)
Post by အိပ်မက်ချယ်ရီ.
စုသည် လမ်းလျှောက်နေရင်းက ရပ်လိုက်ကာ လက်မှာဆွဲလာသော ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထုပ်အကြီးကြီးကို ဈေးဆိုင်အများအပြားခင်းထားပြီး ကျန်နေသော နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ လူအမျာ...
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း……… ဘယ်တော့မှ ပြန်ရနိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့ အချိန်တွေရယ်.. ဘယ်တော့မှ ပြန်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းတွေရယ်…. ဘယ်တော့မှ ပြန်ဆုံခွင့် မရှိနိုင်တေ...
ထမင်းကြော်ဒီထမင်းကြော်လေးက မာမာ့သမီးလေးကြော်ထားတာပါ သူကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်တွေမှာထမင်းချက် ဟင်းချက် မုန့်လုပ်ရတာကိုဝါသနာပါတဲ့အလျှောက်မီးဖိုဆောင်ထဲဝင်ဖြစ်ပါတယ် ...
ငါက ဗလာလူသားတစ်ယောက်လို နေချင်တယ်။
ကိုယ့်အမြင်မှကိုယ် အမှန်လို့ ထင်ကြတဲ့
ရန်ကုန်မြို့ ကြီးမှာ ဈေးဝယ်ခြမ်းရတာ အတော့် ကို စိတ်ကုန်မိပါတယ်။
သတ်မှတ်ချက်မရှိလေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ တို့ ကို လည်းကောင်း
စားသောက်ကုန် တို့ က...
*ခင်မေသစ်Living Fashion Magazine, November, 2013*
အချိန်ကာလကား တရွေ့ရွေ့ ထွက်ခွါလို့...။ ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်ဆီမှ စူးကနဲ နာကျင်မှုတို့ ပြေပျောက်သွားပြီလား ဟု မေးခွန်းထုတ်မိခိုက်.. သူနဲ့အတူ ကုန်ဆုံးခဲ့ဖူးသော အချိန်...
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အလှုရှင်များရဲ့ စုပေါင်းလှုဒါန်းအားဖြင့် ပဲခူးတိုင်း၊ ဥဿမြို့သစ်၊ သဇ္ဇနာမပညာဇေယျုံပရဟိတ(ဘက)ကျောင်း၊ ပေ (၇၀ x ၂၀) စာသင်ကျောင်...
*အိုင်အိုဝါရက်စွဲများ အပိုင်း (၈)*
*၂၀။ စီနီယာကောလိပ် နှင့် ဂျာနယ်လစ်ဇင်သင်တန်း စာသင်ခန်းများတွင်ဆွေးနွေးခြင်း*
အိုင်အိုဝါမြို့က ကျောင်းစာသင်ခန်းတွေကို သ...
သူလေးနဲ့ အတူ...။ မျက်ရည်လွယ်သော .. ကျွန်တော်နဲ့ ပေါ့လေ... လောကထောင့်ကျဉ်းတစ်နေရာမှာ ဆုံတယ်... ကြည့်နေရင်း... ကြည့်နေရင်း..........။ xxxx...
ကျွန်တော် တစ်နေ့က အင်တာနက်ပေါ်မွှေရင်းနှောက်ရင်းတွေ့ခဲ့တာလေးပါ “ရွှေဒေသ” လို့သိရပါတယ်..။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေသမျှသတင်းတွေကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သိချင်...
ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ တတ်နိုင်သလောက် ပို့စ်အသစ်လေးတွေ ပြန်ရေးနိုင်ဖို့် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ အားမွေးဖို့အတွက် အစားအသောက်ကလေးတွေဖက်ကို တစ်ချက်လောက်လှည့်လိုက်...
အမေ့မေတ္တာဘွဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အမေဟာ ကမ္ဘာကြီးဆိုရင် အဖေဟာကမ္ဘာကို တည်ဆောက်သူဆိုတဲ့ စာသားလေးကို သွားသတိရမိ...
Behavioral Science သင်တန်းတစ်ခုကို သွားတက်ခဲ့စဉ်၊ ပါမောက္ခ ဆရာတစ်ယောက်က သင်တန်းအစမှာပင်၊ သင်ကြားမှု အခြေခံဖြစ်အောင် Case Study လေ့လာခြင်း တစ်ပုဒ် ပေးလိုက်ပ...
ထိုအမျိုးသမီး ဖုန်းချသွားပြီးနောက် ကျွန်ုပ်သည် ရေးလက်စ အဘိုးနုပြောပြသည့် ပုံပြင်အား ဆက်လက် ရေးသားလေ၏။ (အဘိုးနု ပြောပြသည့်အတိုင်း ရေးထားခြင်းဖြစ်၏။ မူရင်းန...
အစားအသောက်အကြောင်း ဘလောဂ့်ပေါ်မှာ မတင်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ချက်စားနိုင်တဲ့ ပုဇွန်ငရုပ်ကောင်း အစပ်ချက်နည်းလေး တင်ခ...
အိမျပွောငျးပါတော့မညျ။ ဒီအိမ်လေးဟာ ဧည့်သည်တွေအပေါ် ဧည့်ဝတ်မကျေနိုင်တော့တာ ကြာပြီ ဖြစ်တာမို့
မနက် ၂ နာရီအချိန်မို့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးက အပ်ကျသံမျှပင်ကြားရလောက်အောင် တိတ်ဆိတ်နေသည် ။ တခါတရံ ကြောင်တွေအိမ်ခေါင်မိုးအပေါ် ဆေ...
ကမ်းလာတဲ့လက် ကြင်နာခြင်းတွေ အပြည့်ရှိနေမယ်။
တွဲလျှောက်မယ့်လမ်း မေတ္တာတရားတွေ ချခင်းထားမယ်။
မနေ့က ညနေစာအဖြစ် လုပ်စားဖြစ်တဲ့ ပဲပြား ရေညှိ အရံဟင်းလေးပါ။ ခံတွင်းမြိန်သလို သတ်သတ်လွတ်လည်းဖြစ်တာမို့ စားလို့သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ပဲပြား ရေည...
မလေးမှာလဲ ထိုင်းတုံယမ်းက နာမည်ကြီးတာဘဲ... ထိုင်းဆိုင်မှာစားရတဲ့အကြောင်းက အချို့ဆိုင်တော်တော်များများက ချိုရဲရဲဖြစ်နေတဲ့ အစားသောက်တွေကိုကြောက်လိ...
အခုဓါတ်ပုံကတော့ စင်္ကာပူမှာရှိတဲ့ အာအိုင်တီကျောင်းသားတွေဦးစီးကျင်းပတဲ့ပထမဦးဆုံးဆရာကတော့ပွဲအတွက် ဖိတ်စာမှာအသုံးပြုရန်အတွက်ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့ တဲ့စွယ...
ဘယ်သောအခါကမှ မတွေးခဲ့ဖူးတာကတော့ တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ ...
အမသက်ဝေ Tag လုပ်ထားတာက ၂၇ ထဲက ( အိတ်မှောက်ဖာသွန် ၂၇ တဲ့ ) ကိုယ်က ဖဘမကြည့်ဖြစ်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းလာအော်မှ သိ ... သိပေမယ့် အလုပ်က ယားလို့ မကုတ်အားဖြစ်နေ ၊ ရေး...
(ချစ်တဲ့သက်ဝေရေ… သွန်ပြီနော်… သက်ဝေကို ချစ်လို့ ရေးတဲ့ပို့ စ်) အဲဒီအိတ်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်သေသေချာချာ မှတ်မှတ်ရရ ထည့်ထားတဲ့ နေ့ စဉ်သုံး ပစ္စည်းတွေ ရှိသလို ကိ...
ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာနှစ်ဆယ့်ငါး၊ ခရစ္စမတ်နေ့ဟာ ကျွန်မ မေမေရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ ဒါကြောင့် မွေးနေ့ကုသိုလ်အဖြစ် ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ ဆွမ်းပဒေသာပင်အတွက် ပိုက်ဆံလှူရင်း ဘဏ...
ပဲခူးတိုင်း၊ ဥဿမြို့သစ်၊ သဇ္ဇနာမပညာဇေယျုံပရဟိတ(ဘက)ကျောင်း၊ ပေ (၇၀ x ၂၀) ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် 13.06.2013၊ ကြာသာပတေးနေ့မှ...
လမ်းဘေးအစပ်နား ဖယောင်းပုဆိုးတစ်စ ဖြစ်သလိုပုံခင်း
အဓိက စည်းကမ်းချက် ၅၅ ချက် Essential 55 ကို မဖတ်ခင်မှာ စာရေးသူ Ron Clark နဲ့ အရင် မိတ်ဆက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ Ron Clark ဆိုတာ ဘယ်သူများပါလိမ့်။ ဟုတ်ကဲ့ . ....
မြသီလာ.. ကို ကျမ စ ရေးတုန်းကတော့ ကျောင်းဝန်းကျင်ကို လွမ်းရင်းက အမှတ်မထင် စဖြစ်သွား ရင်းက အဲဒီထဲ အာရုံဝင်စားပြီး ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ေ...
ညဦးပိုင်းက ရွာထားတဲ့မိုးကြောင့် ဒီကနေ့မနက်တော့ သိပ်ပြီးအိုက်စပ်စပ်မရှိလှ။ အချိန်မီရွာတဲ့ သင်္ကြန်မိုးကို စိတ်ထဲမှပင် ကျေးဇူးတင်မိသည်။ ဒီနှစ်နွေက အရင်နှစ...
ခုတလော……တဲ့… ခုတလော… ဘာတွေနဲ့ အချိန်ကုန် နေမိပါလိမ့်..။
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့.. အိမ်ပြန်ရောက်ကတည်းက..မီးပူ တိုက်ရမဲ့ ၃ လစာနီးပါး အ၀တ်ပုံကြီးကလည်း အခန...
အချစ် ညီမျှခြင်း အချစ် (၃)
မင်းကို ကိုယ်ချစ်တယ်လို့ တခါမှမပြောခဲ့ဘူးနော်... လို့ မောင်က ကျွန်မကို ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ဖူးသလို .... ကျွန်မ မောင့်ကို ချစ်တယ်လို့ တခါမှမပြောခဲ့ဘူး ......
ဒီကနေ့ဒ်ါမြရင်၏သား ဘွဲ့ယူမည့်နေ့ဖြစ်သည်။ အလှပြင်ဆိုင်ထဲက ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ကြီးရှေ့ရာက်နေသာဒ်ါမြရင်တစ်ယောက် သားဝယ်ပေး လိုက်တဲ့ ခေတ်ပေါ်အကောင်းစားအကျီင်္ဝမ်းဆက်...
”တကယ်ဆိုရင် အချစ်ပဲလို တယ် ဘာကြောင့် သတ္တိမရှိလဲ ကွယ်” အဘိုးပါးစပ်ဖျားကသီချင်းညည်း သံကိုကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်တော် တော်တော်ရယ်ချင်သွား တယ်။ ဘိုးက အဲ့လိုပဲ၊ ...
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Myanmar-China Gas...
မွနျမာကလပျက ဦးစီးကငျြးပတဲ့ မုနျ့ဟငျးခါးပှဲတျောမှာ ရိုကျခဲ့တဲ့ပုံတခြို့ပါ။ ထငျထားတဲ့အတိုငျး လူတှကွေိတျကွိတျတိုးပါပဲ၊ ထငျထားတဲ့အတိုငျး သိပျမပြျောခဲ့ရပါဘူး။ ဖ...
အစ က တော့မရေးတော့ဘူးလားလို့ ခြေချုပ်ကော လက်ချုပ်ကော အကုန်မိနေတာနဲ့ မတင်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားလိုက်တာ ... မနေနိုင်လို့ ရေးမိပြန်ဘီ သည်းခံပြီးသာ ဖတ်ပေးကြနော် ...
သမီးလေး မွေးလို့ နားနေချိန်မှာ NHK သတင်းဌာနက ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ဂျပန်ရိုးရာ အိုဟနမိ ပန်းကြည့်ပွဲတော် အကြောင်းကို မထင်မှတ်ဘဲ ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ ပန်းရောင်နဲ့ အ...
အောက်တိုဘာလ တစ်ဆယ့်လေးရက်။ ရာသီဟာ သူ့သဘာဝအတိုင်း သိပ်ကိုမျှတသင့်တော် လှပနေခဲ့ပါတယ်။ သောကြာနေ့ပါ။ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မြစ်တစ်စင်း သတ္တိရှိရှ...
Las Vegas မြို့လည်ကနေ ၁၅ မိုင်ပဲဝေးတဲ့ Red Rock Canyon ဆိုတာ ကိုကြီးကျောက်အတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာနေရာပါပဲ၊ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာကျောက်လွှာသွင်ပြ...
(၁) ထားကို စတင်သိကျွမ်းခဲ့တာ ကျွန်မတို့တစ်ဘက်ခြံက မိတ်ဆွေများရဲ့သား မောင်မော်လွင် မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကပါ။ ထားက မောင်မော်လွင်ရဲ့ သတ...
ကျွန်မယဉ်သူမေဟာ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်….။ ဒီတော့ မောင် က ကျွန်မအတွက် ရေးချွတ်စရာ ဇာတ်လမ်းလိုပေမယ်လို့ ထင်ကောင်း ထင်လိမ့်မယ်…....
ကျွန်မ နောက်တောင် ကျနေပြီ ထင်ပါရဲ့။ အသံတွေ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားနေခဲ့ရတာဖြင့် ကြာ ကြာလှရော့မယ်။ ဘာသံတွေလည်းဆိုတော့ ကျွန်မတို့ မြန်မာအမျို...
ကျမ ဒီမှာ ရှိနေပါတယ်
Chit Kyi AyeCreate Your Badge
တကယ်တော့ ဒီနေ့ ဘာလီအပိုင်း ၉ကို ရေးတင်ဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ မနေ့ညက CNA သတင်းမှာ ဘာလီ ကူတာဘိခ်ျက ကောင်းဘွိုင် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြည့်လိုက်ရ တယ်။ ဒါနဲ့ ကျမလည်း ယူကျု့က ဗီဒီယိုကလစ် ကိုသွားကြည့်၊ တခါ ဒီမနက် The New Paper သတင်းစာမှာ ပါလာတာတွေ့ပြန်တော့ ဒီသတင်းကို အရမ်းရေးချင်သွားတယ်။ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားသွားတာက ကျမက ဘာလီပြန် ပူပူနွေးနွေး မဟုတ်တောင် သိတ်ပြီး မအေး စက်သေးတဲ့အတွက်ရယ်၊ ကျမတို့ နေခဲ့တဲ့ Kuta Beach မှာ ဖြစ်နေလို့ရယ်ပါ။ သတင်းကိုတော့ အသေးစိတ် မရေးတော့ပါဘူး။ ခြုံပြောရရင် အိန္ဒိယလူမျိုး စင်္ကာပူပီအာ ခံယူထားတဲ့ Film Maker - Mr.Virmani ဆိုသူဟာ လာမဲ့ July မှာလုပ်မဲ့ Melbourne Int'L Film Festival အတွက် Documentary short film တခု ဘာလီ Kuta Beach မှာ သွားရိုက်ရာက စခဲ့ပါတယ်။
သူ တင်ပြချင်တာက ဘာလီရဲ့ အလှအပ နဲ့ Beach ကို အမှီပြုလို့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပြုနေကြတဲ့ Cowboys တွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ ဖြစ်နိူင်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို နားလည်မှု လွဲ ကြတယ် မသိဘူး။ ဘာလီဟာ ဒီ Cowboys တွေကြောင့် အကျည့်တန် စေတယ်။ Cowboys တွေကိုလည်း ဂျစ်ဂလိုတွေ(Gigolo) လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုတယ်လို့ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီမှာ Cuta Beach ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက Beach Boy တွေကို ခေါ်ယူစစ်ဆေး မေးမြန်းတာတွေ လုပ်လာ ကြတယ်။ တိုတိုပြောရရင် ဒါကို Beach Boy တွေက မကျေနပ်ဖူးပေါ့။ သူတို့ ဒီလိုနေ-စားလာတာပဲ ဆယ်စုနှစ်မက ရှိခဲ့ပြီ ခုတော့ ဒီ Film-Maker ကြောင့် လို့ဆိုတယ်။ Mr.Virmani ကလည်း ပြောရှာပါတယ်။ Beach Boys တွေအတွက် သူစိတ်မ ကောင်းတဲ့ အကြောင်း၊ သူပေးချင်တဲ့ မက်စိပ်က ဒါ မဟုတ်ကြောင်းပါ။ ကျမလည်း Kuta Beach မှာ နေခဲ့တော့ Beach Boy တွေနဲ့ Foreigner အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နေထိုင် ဆက်ဆံပုံတွေ တွေ့ခဲ့တာပါပဲ။ တယောက်နှုတ်ခမ်းမှာ တေ့ထားတဲ့ စီးကရက်ကို တယောက်က ယူသောက်လို့၊ အုပ်စုလိုက် ဝိုင်းဖွဲ့ ထိုင်လို့၊ တီးကြ မှုတ်ကြ ဆိုကြ ကကြ နဲ့ပါပဲ။ ကျမ အနေနဲ့တော့ ထူးဆန်းတယ် လည်း မထင်ခဲ့မိပါဘူး။ ဘာလီမှာ Beach Boys တွေနဲ့ နိူင်ငံခြား သူတွေ တွေ့ရသလို၊ ထိုင်းသွား ရင်လည်း ထိုင်းမတွေကို နိူင်ငံခြားသား လူဖြူတွေနဲ့ တွဲလျက် တွေ့ရမှာပါပဲလေ။ ဆန်ပေးလို့ ဆီရနေကြတဲ့ ကိစ္စမို့ အထူးတလည် ဖြစ်မ နေတော့ ပါဘူး။ သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ Beach Boy တချို့ရဲ့ ပြောစကားတွေကဖြင့် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ "ငါတို့က လာသမျှလူတွေကို တာဝန်ကျေအောင် ဧည့်ခံရမှာပဲ။ တချို့ အမျိုးသ မီးတွေက ငါတို့ကို တိုးဂိုက်အနေနဲ့ ငှားတယ်။ ငါတို့ ပါသွား တဲ့အတွက် လမ်းခရီး တလျှောက်မှာ အမှတ် တရ ပစ္စည်းဝယ်ရင် ဘာမဆို သက်သာတဲ့ဈေး နဲ့ရတယ်။ များသောအားဖြင့် အဲဒီရက် တွေမှာ သူတို့စားသလို အကောင်းစား တွေ စားရတယ်။ တချို့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ငါတို့ ၂ရက်-၃ရက်ကြာရင် သူတို့ ဟိုတယ် ခန်းထဲ ရောက်သွားကြ တယ်။ ဒီအတွက် ငါတို့ ပိုက်ဆံမ ယူဘူး ဒါကြောင့် ငါတို့ဟာ ဂျစ်ဂလိုတွေ မဟုတ်ဘူး" သူတို့လိုချင်တဲ့ သာယာမှု ကို ငါ တို့ကပေးပြီး သူတို့က နာရီ စတဲ့ အဖိုးတန်လက်ဆောင်တွေ ပြန်ပေးတယ် လို့ ပြောကြတယ်။ "အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင် ငါ့ကို နောက်နှစ်မှာ ဂျာမဏီကို သူနဲ့အတူ ခေါ်သွားပါ့မယ်လို့ ဂတိများတောင် ပေးတယ်။ အဲသလိုသာ တကယ်ခေါ်သွားရင် ငါကတော့ အဲဒီ အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြီး ပေါင်းသင်းမယ်။ ဂျာမဏီ ကျရင်တော့ ငါ့ဘဝဟာ ခုလို မဟုတ်တော့ ဘူး ဆင်းရဲတွင်းက လွတ်ပြီလို့" ပြောသတဲ့။ တကယ်လည်း သူတို့ဘဝမှာ ငတ်တခါ ပြတ်တ လှည့်တွေ ရှိခဲ့ပါသတဲ့။ ဘာလီ လိုနေရာမျိုးဟာ ခြောက်သွေ့တဲ့ ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်မှသာ သူတို့လေးတွေလည်း အူစိုရပေတာကိုး။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဂတိပေး သွားတဲ့ အမျိုးသမီး ကဖြင့် ဂျာမဏီကို ခေါ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ Beach Boy လေးတွေဟာ အပျော်ကြံ သွားခြင်း ခံရရှာသူတွေ လို့တောင် ရယ်ပွဲဖွဲ့ ပြောရမလိုလို...။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့လည်း နောက်ထပ် လာသမျှ အသစ်အသစ်သော နိူင်ငံခြားသူတွေနဲ့ ချစ်ပွဲဝင်ကြပြန် တယ်။ Beach Boy တွေဟာ အအေး၊ စီးကရက်ရောင်းတယ်၊ Beach ထိုင်ခုံနဲ့ ရောင်စုံထီး တွဲထားတာတွေ ငှားစားတယ်။ တချို့လည်း Surfing သင်ပေးနိူင်ကြသူတွေပါ။ Beach မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေဟာ များသောအားဖြင့် ဘာလီကျွန်းပေါ်ကချည်း မဟုတ်ပဲ ဂျာဗားကလာသူ တွေလည်းရှိ၊ တချို့လည်း ဝပ်ပါမစ် မရှိပဲလုပ်နေသူတွေတောင် ရှိသတဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုတော့ အရင်လို အနေအစား မချောင်တော့ပဲ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုအောက်မှာ Beach Boy တွေ အတော် စိတ်အကျဉ်းကျနေကြလေရဲ့။ ယူကျူ့က ဗီဒီယိုကိုတော့ ဒီမှာ ကြည့်နိူင်ပါတယ်
ငါ အစိမ်းရောင် ပြထားတာပဲလေ...ဒါပေမဲ့ တတိန်တိန် အသံပျောက်....ချက်နေကျလူတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပါလိမ့်.....၊ ဂျီမေးလ်ကို ခဏခဏ ရီစတပ် ပြန်လုပ်ရင်း...ဟင်း....!! နှလုံးသား ကင်းမဲ့လိုက်ကြပုံများ...ငါ့ကို ဘယ်သူမှ မေးလ်ပို့ မထားကြဘူး.....၊ ငါ ပိုစ့် အသစ် တင်လို့ထား....နာရီများ ဖြတ်ကျော် ဇီးရိုးကော်မန့် တဲ့....ငါ့ကို ပမာမခန့် ပြုံးပြနေသေးတယ်.....၊စီဘောက်စ် ကြည့်တော့လည်း....တနေပဲ ကုန်လို့မှ တယောက်လာ နှုတ်မဆက်....ငါ့အသဲ ဟက်တက် ရက်စက်လိုက်ကြပုံ....၊အလို....ကိုယ်တွေပဲ ပူလာသလိုလို...ခြေဖျားတွေ အေးခဲ ဘယ်မှလည်း မရွေ့ချင်....ကွန်ပျူတာရှေ့ ကြောင်တောင်ငေး....သွေးလေ ချောက်ခြား....ဘလော့ဂ်ဂါ ဖျားတဲ့ည....။Update: ကျမရေးခဲ့တဲ့ လူ-အမဲလိုက်ခြင်း ပိုစ့်ထဲက အမျိုးသမီးက Corrective Training ၆နှစ် ကျခံသွားရပါတယ်။ Corrective Training က Jail Terms ထက် ပိုပြင်းထန်ပြီး လျှော့ရက် မရှိ နှစ်အပြည့်ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလီ ခရီးစဉ်လေး ဆက်လိုက်ကြရအောင်....ဒါက ပြန်မဲ့နေ့ မနက် လေဆိပ်အသွား လမ်းဆုံမှာတွေ့ရတဲ့ နတ်မြင်း ၆ ကောင်ကတဲ့ စစ်ချီရထားပါ။ ရထားပေါ်က စစ်သည်တော်ရဲ့ လေးတော်ချိန်ရွယ် ဟန် နဲ့ နတ်မြင်းတွေရဲ့ ကဆုန်ပေါက်နေဟန်တွေဟာ လက်ရာမြောက်လွန်းတာ မို့ ဟိုးမိုးယံအမြင့် ပျံတက်တော့ မလားတောင် ထင်မှတ်စရာပါ။ သဘောကျလွန်းလို့ ကားပေါ်ကနေ မိအောင်လှမ်းရိုက်ခဲ့တယ်...ဒုတိယပုံက အချစ် ရိုက်ပေးတဲ့ပုံပါ၊ ကားပေါ်ကနေ ရိုက်ရတာမို့ ပထမပုံ ရိုက်ပြီးပြီးချင်း သေချာချင်တာကြောင့် သူ့လက်ထဲ ကင်မရာ ထည့်ပြီး နောက်တပုံ နောက်တပုံ လို့ ပြောရင်း ရိုက်ခိုင်းခဲ့တာပါ ဓါတ်ပုံမှာ ရိုက်ချိန် တူနေတာကို တွေ့ကြပါလိမ့်မယ် သူ့မလည်း ကျမ ဘေးကနေ အမြဲ အဆင်သင့် ရှိနေရရှာပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ဂါ့ ယောင်္ကျားဆိုတော့လည်း ဒီလောက်တော့ လက်သွက်ရမယ်ပေါ့လေ...လမ်းဘေးတလျှောက် တွေ့ရတဲ့ အုတ်ကြွပ်မိုး နီနီ အိမ်ပြားပြားလေးတွေ....ကျမရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးတမြို့နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ရယ်....ဒါကတော့ ဘာလီရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုအလှ လက်ရာတွေနဲ့ ခင်းကျင်းပြသ ထားတဲ့ အူဘွတ် ခရိုင် Ubud District ရဲ့ လမ်းသွယ်ထဲက လမ်းဘေး ဆိုင်လေးတွေ သူ့ကို Island's Cultural Centre လို့တောင် အမြတ်တနိူးထားလို့ တင်စား ခေါ်ဝေါ်ကြလေရဲ့၊ လမ်းတလျှောက် ပန်းချီ ကားဆိုင်တွေ၊ သစ်သား ပုံထွင်း (Woods Carving) ဆိုင်တွေ၊ ကျောက်တုံး ပုံထွင်း (Stone Carving) ဆိုင်တွေ၊ ပရိဘောဂဆိုင် တွေဟာ ဘာလီနီးစ်တွေရဲ့ လက်ရာအဆင့်အတန်း နဲ့ ဖန်တီး နိူင်စွမ်းတွေကို ဖော်ပြနေကြတယ်.... ကလေးတွေအတွက်လည်း ဒီလို လှပတဲ့ စွန်ရောင်စုံ ဆိုင်လေးတွေ ရှိတယ်၊ လေကြောင်းကို လိုက်လို့ ရစ်လုံးကိုင်လက်ရဲ့ အတိုးအလျှော့ ပါးနပ်စွာ ကိုင်တွယ်တတ်မှုနဲ့ဆို သူဟာ ကိုယ်ပိုင် သိန်းစွန်ရဲ တကောင်လို တိမ်ယံထက်မှာ မြူးမြူးကြွားကြွား ပျံသန်းနိူင်လိမ့်ဦးမှာ....ဘာလီနီးစ်အိမ်တွေရဲ့ တံခါးဘောင်ခွေပုံဟာ ပန်းနွယ်ကနုတ်တွေနဲ့ ခမ်းနားလွန်း နေသလို တကယ့် သစ်မာသားတွေနဲ့ ပြုလုပ်လေ့ ရှိတာမို့ လေးလည်း အတော်ကို လေးမှာပါ။ ဒါက ခုခေတ် အိမ်တွေမှာသာ တပ်လေ့ရှိပါ တယ်။ ဘာလီလူမျိုးရင်းတွေရဲ့ အိမ်ကတော့ဖြင့် တံခါးတပ်လေ့ မရှိကြပါဘူး၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာထဲက လူကုန်ဟာ ကိုယ့်ဆွေမျိုး ရပ်ဆွေရပ်မျိုး အစုတွေပါ ပဲ၊ ပစ္စည်းလည်း ပျောက်လေ့ မရှိ၊ လူစိမ်းလည်း မရှိ၊ ရှိခဲ့ရင်တောင် ယုံကြည် စိတ်ချလေ့ ရှိကြပါသတဲ့။ ခုထက်ထိ တချို့အိမ်တွေမှာ တံခါးတပ်ထား တာ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး... ဘာလီလူမျိုးရင်း (Typical Balinese)တွေရဲ့ ရွာကို အချိန်မရလို့ မသွားခဲ့ရတာ ကြောင့် ဒီပုံကို အင်တာနက်ကနေပဲ ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...တံခါးတွေ အထပ်ထပ် သော့ခတ်ပိတ်နှောင်ထားရင်းနဲ့ပဲ အရာရာကို စိတ်မချ လက်မချ မယုံမရဲ ရှိနေကြရတဲ့ မြို့နေလူတန်းစားတွေရဲ့ ရင်အပူနဲ့တော့ ကွာခြားလွန်းလှပါရဲ့....။ နည်းပညာတွေတိုးတက်၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ မြင့်မားလို့ လိုချင် မက်မောစရာတွေ၊ ရုပ် ဝတ္ထု အသစ်အဆန်းတွေ များပြား လာမှုဟာ လူတွေရဲ့ စာရိတ္တကို ချစားပါးလျ စေခဲ့တာလား...ဒါမှမဟုတ် လူတွေ ကပဲ ရောင့်ရဲတင်းတိမ် မှုတွေ ဆင်းရဲလာတာလား....ကျမ စဉ်းစားမိခဲ့ ပါရဲ့....လမ်းဘေးက တံခါးဘောင် ရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေး တဆိုင်...ဟိန္ဒူ နတ်ဘုရား ကျောက်ရုပ်တုတွေကို ကွဲပြားတဲ့ ထုလုပ်ပုံ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လမ်းလေးခွဆုံ တွေမှာ တွေ့ရတတ်တယ်...မကောင်းဆိုးဝါး တွေကို အဝေးဆီ မောင်းနှင်ပေးတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်...တကယ်လို့များ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ လမ်းလေးခွဆုံက မလာပဲ လမ်းကြို လမ်းကြားကလာခဲ့ရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်ပါ့...ဘာလီမှာ မိသားစု ဘုရားကျောင်းငယ်တွေ အပါအဝင် ဘုရားကျောင်း စုစုပေါင်း ၂၀,၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်...မိသားစုဘုရား ကျောင်းဆိုတာက မိသားစုပိုင် ခြံဝိုင်းထဲမှာ နေ့စဉ်ပူဇော်ပသမှု လုပ်နိူင်ဖို့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဘုရားကျောင်း အသေးစားလေးတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ တနှစ်မှာ ၂ကြိမ် ဘုရားကျောင်းကြီးတွေ ပွဲလုပ်တဲ့အခါ ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေ ကျောင်းကြီးတွေ ဆီ မိသားစုလိုက် သွား ရောက် ပူဇော်လေ့ရှိကြပါသတဲ့၊ မိသားစု ဘုရားကျောင်းကိုတော့ ခြံဝိုင်းရဲ့ အရှေ့မြောက်ဖက်မှာ ဆောက်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ အရှေ့အရပ်က နေထွက်တဲ့ဘက်ကို ကိုယ်စားပြု ပြီး မြောက်အ ရပ်ကတော့ သားကြီး ဩရသတွေရဲ့ နေအိမ် ရှိရာဘက်ကို ကိုယ်စားပြု တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဘာလီနီးစ်တွေဟာ မိသားစုတွေအကုန် ခြံဝိုင်းကျယ်ကြီးထဲ နေလေ့ရှိကြ ပါတယ်။ သားသမီး တွေ အိမ်ထောင်ကျသွားပြီဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အိမ်နေရာ ချထားပေးမှုက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ မိဘတွေအိမ်က ခြံဝိုင်းအလယ်မှာ၊ သားအကြီးဆုံးအိမ်က မြောက်ဘက်မှာ၊ သားအလတ် က အနောက်ဖက်မှာ ဖြစ်ပြီး အငယ်ဆုံးသားက တောင်ဘက်...မီးဖိုဆောင်နဲ့ အနီးမှာ နေရာချ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သမီးတွေကတော့ မိဘနဲ့ အတူနေပြီး အိမ်ထောင်ကျတော့မှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အိမ်လိုက်လို့ ရှေ့မှာ ပြောခဲ့သလို ခင်ပွန်းရဲ့မွေးချင်းနံပါတ်စဉ် အတိုင်း နေရာချ ပေးတဲ့ နေရာမှာ လိုက်နေကြရပါတယ်။ သားသမီးတွေရဲ့ အိမ်တွေကို မိဘအိမ်ဘက် မျက်နှာပြုလို့ ဝန်းရံပြီးဆောက်လေ့ ရှိပါတယ်။အဲဒီမှာ ကျမ တွေးမိတာက သားတွေ အများကြီး မွေးထားရင် ဘယ်လိုများ နေရာချမှာပါလိမ့် ဆိုတာပါ...၊ နောက်တခါ သွားဖြစ်ရင် ကျမ မေးခဲ့ပါ့မယ်....:)ဘာလီမှာလည်း Silent Day (Nyepi) ဆိုတာရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ် မတ်လထဲမှာ ကျင်းပလေ့ရှိပြီး အဲဒီနေ့ကျရင် လေဆိပ်ကအစ ပိတ်ပါ တယ်။ ဒီနှစ်တော့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ကို Silent Day အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး Travel Agent တွေကတဆင့် တလ ကြိုတင်ကြေငြာတာမို့ အဲဒီနေ့မှာ ဘာလီ ရောက်နေတဲ့ နိူင်ငံခြားသားတွေလည်း ဟိုတယ်မှာပဲ နေကြရတဲ့နေ့တနေ့ပါ။ Silent Day မတိုင်ခင်ညဟာ နှစ်သစ်ကူး အကြိုည ဖြစ်ပြီး Silent Day မှာတော့ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ Holy day အဖြစ် ဥပုသ် ဆောက်တည်ကြတဲ့နေ့ ၊ အင်မတန် တိတ်ဆိတ် မှောင်မိုက်တဲ့နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ မရောက်ခင် ရက်သတ္တ နှစ်ပတ်လောက်ကတည်းက ရပ်ကွက် တခုနဲ့ တခု အရုပ်ကြီးတွေ အပြိုင်အဆိုင် လုပ်ကြပြီး ရပ်ကွက်ထိပ် မှာ ခုလို ထားတတ် ကြပါတယ်။ ရပ်ကွက်ပေါင်းစုံက အရုပ်မျိုးစုံတွေကို နှစ်သစ်ကူး အကြိုည မှာ Parade လုပ်ပြီးလမ်းတလျှောက် သယ်ပိုး လှည့်လည် ပြသလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ ဝိဥာဉ်အဖြစ် မီးရှို့ ဖျက်စီး ပစ်တတ်ကြပေမဲ့ တချို့ရပ်ကွက်တွေကတော့ တပင်တပန်းလုပ်ထား ရတဲ့ အရုပ်မို့ မဖျက်စီးသေး ပဲ အတန်ကြာအောင် ခုလို ထားတတ်ကြပါတယ်။ တွေ့တဲ့အရုပ် ကို မိအောင် ကားပေါ်ကပဲ အမြန် ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ အောက်ကပုံတွေကတော့ ထိုင်ခုံတွေ၊ မျက်နှာကျက်တွေမှာ သဘာဝ ထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ ဝါး၊ သစ်သား၊ နှီးတွေနဲ့ လုပ်ထားတာလေးတွေကို ရိုက်ခဲ့တာပါ။ လူကို သဘာဝအတိုင်း အေးစေတဲ့ မျက်နှာကျက် လေးတွေမို့ သဘောကျမိပါတယ်...။ဘာလီ ခရီးစဉ်ကို အပိုင်း ၁၀ မှာ အဆုံးသတ်ပါမယ်...:)
ကျောင်းအကြောင်း....တွေးမိတိုင်း လွမ်းရ၊ ငယ်ပေါင်းသူငယ်ချင်းတွေကို တမ်းတရ၊ ချစ်သော ဆရာ ဆရာမတွေကို သတိရ၊ အထူး သဖြင့် ကျမတို့ရဲ့ မြို့မကျောင်းကြီးကို သိတ်လွမ်းရပါ တယ်။ အဲဒီတုန်းက အသားညိုညို၊ မျက်လုံးအစ်အစ်၊ ပါးဖောင်းဖောင်း၊ နှုတ်ခမ်းထူ ပြည့်ပြည့်၊ လူလေးက ပိန်ပိန်နဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ဟာ ကျမပေါ့။ကျောင်းတော်ကြီးဟာ ကျမတို့လို အသက်ရွယ်တူ ကလေးတွေအကြားမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ မိဘတွေရဲ့ အဆင့် အတန်း၊ အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ စတဲ့ ကွဲပြားမှုတွေကို တန်းညှိလို့ ပေးခဲ့တယ်။ အားလုံးဟာ အတူတူ တသားတည်း ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ တကယ်ဆို ပြန်မတွေး ချင်တော့ဘူး...လက်တွေ့ကျကျ ပြောရရင် အဟောင်းတွေက အစုတ်သာ ဖြစ်မှာပဲ ဘယ်နည်းနဲ့မှ အသစ် ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နောက်ကြောင်း ပြန်မတွေးချင်ဘူး။ ကျမက လူငယ်ပီပီ ရှေ့သို့သာ ချီတက်လိုက်ချင်တာ (အဟမ်း...! ) ဒါပေမဲ့ပေါ့လေ...သူငယ်ချင်း သက်ဝေရဲ့ မတက်ဂ် တတက်ဂ်ပိုစ့်ကြောင့် စဉ်းစားမိသမျှ ရေးချလိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ သက်ဝေတို့ တက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးဟာဖြင့် အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့တဲ့ ကျောင်းကြီး။ ကျမ အဖေက မြို့မကျောင်းသား ဟောင်း အဲဒီလိုပဲ ကျန်တဲ့ တခြားကလေးတွေ အားလုံးဟာလည်း မြို့မကျောင်းကြီးရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေပဲ ဖြစ်ကြလေ တယ်၊ ကျမညီမ အငယ်မ နဲ့ အတန်းတူတဲ့ ညီမငယ် မွန် (သုနှင်းဆီ) ဟာလည်း မြို့မကျောင်းထွက် တယောက် ပါပဲ။ကျောင်းတက် ခေါင်းလောင်း ထိုးလို့ နေရာတကျ ရှိပြီ ဆိုတာနဲ့ အားလုံး လက်အုပ်လေးတွေချီလို့ ဩကာသ ဘုရားရှိခိုးနဲ့ နံနက် စာသင်ချိန်ကို ကျက်သရေရှိစွာ စတင်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးပါ...မြို့မကျောင်းထွက် တွေရဲ့ တူညီတဲ့ အချက်က ကျောင်းလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ သွေးတွေက ဖျဉ်းကနဲ၊ ပူကနဲ၊ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာမြဲ၊ မျက်လုံးတွေ အရောင် တောက်လာမြဲ၊ ကျောင်းကြီး အတွက် ဘာများ လုပ်ပေးနိူင်မလဲ တွေးမိ ကြမြဲပါပဲ။ကျမတို့ ပေါင်းမိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး စာတော်ကြသူတွေ ။ ၄တန်းမှာ မြို့နယ်ဆု ရလို့ အဖေက ဆုယူဖို့ အင်္ကျီအသစ်လိုက် ဝယ်ပေးတော့ ကျမ ရွေးခဲ့တာက ကိုရီယားအင်္ကျီပုံ ဂါဝန် အဖြူအစိမ်း ၂ရောင်စပ် ချုပ်ထားပြီး ရင်ဘတ်မှာ ဖဲပြား အကြီးကြီးနဲ့။ ကလေးတုန်းက သိတ် ကြိုက်ခဲ့တဲ့ အင်္ကျီ တထည်ပေါ့။ ကိုရီးကားတွေဆိုတာ ဘာမှန်းညာမှန်း မသိခင်တည်းက အဲသလို ကံစပ်ခဲ့တာ ပြောရမှာပေါ့...။ အတင်းကြီးကို ဆက်စပ်လိုက်ပါတယ်။လေးတန်းမှာ အတန်းပိုင် ဆရာမကြီး စာအသင် ကောင်းလွန်းလို့ ကျမတို့ ကျောင်းလုံးကျွတ် အောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အောင်ဆို ဆရာမကြီး ရဲ့ စာမရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဒဏ်ပေးပုံက ကဒ်ထူပြားကြီးကြီး မှာ "ကျနော် / ကျမ စာမရပါ" ဆိုပြီးရေး၊ ကြိုးနဲ့ လည်ပင်းမှာဆွဲပြီး အတန်း စဉ်တိုင်း ကို ပတ်ပြတာပါ။ မတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး လေးဘက် ထောက်သွားကြရ တာပါ။ ဘယ်လောက် ရှက်စရာကောင်းလည်း မှန်းသာ ကြည့်ကြပါတော့။ အဲဒီထဲမှာ ကျမတို့ သက်ဝေတို့ လုံးဝ လုံးဝ မပါခဲ့ဘူးဆိုတာ ရဲရဲကြီး ခေါင်းမော့ ရင်ကော့လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ။မှတ်မိသလောက် ဆရာမတွေရဲ့ ဒဏ်ပေးပုံကို ပြောရရင် ထိုင်ခုံကို ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး လျှောက်ခိုင်းတယ်၊ ကော်ရစ်ဒါမှာ ဒူးထောက်ခိုင်းပြီး ဖြတ်သွား သမျှတွေကို "အဲဒီမှာ ကြည့်ကြဟေ့ စာမရတဲ့ဟာတွေ၊ အရှက်မရှိတဲ့ဟာတွေ" လို့ အတန်းထဲကနေ ဆရာမက လှမ်းအော် ပြောသေးတာမျိုးပါ။ကျမ အကြိုက်ဆုံး ဒဏ်ပေးနည်းကတော့ နားရွက်ဆွဲ လိမ်ရတဲ့ ဒဏ်ပေးနည်းပါပဲ။ အတန်း ထဲက စာတော်သူတွေကို ဆရာမက စာအရင် မေးပြီးမှ အတန်းကို အုပ်စုခွဲ ပေးပြီး စာလိုက်မေးခိုင်းတာပါ။ မိန်းကလေး အချင်းချင်းမို့ စာမရရင် ဆရာမ မမြင်အောင် စာထောက်ပေး တတ်ပေမဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး ကျောင်းသားတွေကိုတော့ ကျမက ၃၆၀ ဒီဂရီ လည်သွားအောင် နားရွက်ကို တအား ဆွဲလှည့်ခဲ့မိတာ။ ခုပြန်တွေး မိတော့ ပြုံးချင်စရာ....။တခြားကျောင်းသူတွေက သူ့အုပ်စုလေးနဲ့သူ နေလေ့ရှိကြပေမဲ့ ကျမက ဘယ်အုပ်စုနဲ့မဆို ပေါင်းတယ်။ ကျမလွယ်အိတ်ထဲမှာ ကျောင်း စာအုပ်တွေ အပြင် အချိန်မရွေး ရှိတတ်တာ က သီချင်းစာအုပ် နဲ့ သားရေပင်ကြိုး အရှည်ပါ။ အဆော့သန်တဲ့ကျောင်းသူတွေ ထဲမှာ ကျမ က နံပတ်ဝမ်းဆိုတော့ သူများတွေ အပျိုလုပ်နေတဲ့ ၉တန်း-၁၀တန်း ထိကို လက်လက်လန်အောင် ဆော့ပါတယ်။ထမီအစိမ်းကို ယောင်္ကျား လေးတွေ ခါးတောင်း ကျိုက်သလို ဒါပေမဲ့ ထမီအစကို နောက်ထဲမ ညှပ်ထည့်ပဲ ရှေ့မှာ လက်တဖက်နဲ့ စုကိုင်၊ ပြီးမှ သားရေပင်ခုန်တမ်း ဆော့ပါထယ်။ ဒူးအမြင့် ကနေ စခုန်လိုက်တာ ပခုံး၊ ခေါင်း၊ တလံကျော် အမြင့်ထိပါပဲ။ ကစားရင်လည်း အသင်း ခေါင်းဆောင်မို့ သေတဲ့လူတွေ အတွက်လည်း ကလူရသေးတာ။ အင်မတန် တက်ကြွပါ တယ်။ သက်ဝေကကျတော့ အငြိမ်ပါ၊ ကျောင်းတုန်းထဲက သူက သိတ်မဆော့တတ်တဲ့သူ။ အပျိုလေးဂိုက် ဖမ်းနေတတ်သူပေါ့...။မှတ်မှတ်ရရ ၈တန်းနှစ်မှာ သူငယ်ချင်းမ တယောက်က အပြားကြီး တပြားတည်းပေါ် ခြေထောက်နှစ်ဘက်လုံး တင်စီးရတဲ့ စကိတ် ဆိုတာ ယူလာပါတယ်။ စီးမဲ့နေရာကိုတော့ ဆရာကြီး ရုံးခန်းနဲ့ ဟောပြောခန်းအကြားက ကွန်ကရစ်ခင်းထားတဲ့ ဗံဒါပင်လမ်းကို ရွေးချယ်ပြီး ကျောင်းလွှတ် တာနဲ့ စီးလိုက်ကြတာ ထမီချုပ်ရိုးကွဲသူကွဲ၊ ဒူးပြဲသူပြဲ၊ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း တံတောင်ဆစ် ပွန်းပဲ့သွားရတဲ့ အထိ ဆော့ခဲ့ကြတာပါ ။ဆော့နည်းကတော့ ပေါင်းစုံနေအောင်ကို ဆော့ပါတယ်။ ထုပ်ဆီးတိုး၊ ကုလားမစည်းနင်း၊ ကြက်တောင်ရိုက် ( ကြက်တောင်ကို ကျောင်း နောက်ဖက် ကြက်တောင်ကွင်းက သွားကောက်ကြတာပါ) ခုန်းပိုးစီးပြီး စက်ဝိုင်းပုံရပ်လို့ ဘောလုံးပစ်တမ်း၊ တိုင်ဦးတမ်း တွေပါ။ ဗံဒါသီး ကောက် အုတ်ခဲနဲ့ထုပြီး ဗံဒါစေ့ထုတ် စားတတ်ကြပါသေးတယ်။အဲဒီတုန်းက ကျောင်းဝတ်စုံက အင်္ကျီဖြူ လက်စက၊ လက်ရှည်၊ ရင်စေ့၊ ရင်ဖုံးတွေပဲ ဝတ်၊ ပါးမှာ သနပ်ခါးပါးကွက်နဲ့ ဆံပင်ရှေ့ ကို ဆာမူရိုင်းပုံ အတိချ၊ အနောက်ကို ခပ်မြင့်မြင့် ပိုနီတေး စီးလို့ အပျိုကြီးဂိုက်ဖမ်းပြီး လူကဖြင့် မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့နေပုံက မျက်စိထဲ တော်တော်ကို အစပ်အဟပ် မတည့်ချင်စရာ။ စာတော်လို့ တော်ပါသေး...:)၈တန်းနှစ်မှာ နောက်ထပ် အမှတ်ရစရာ တခုက မုန့်စားလွှတ်ချိန်ဆို အတန်းပိုင်ဆရာမနဲ့ အတူ ကျောင်းနောက်ဖက် သွားပြီး ဆေးလိပ်ခိုး သောက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ကို ဖမ်းကြရတာပါ။ ကျမနဲ့ ဆရာမကို တွေ့လို့ ကျောင်းသားတွေ ထွက်ပြေးပြီဆို ဆရာမက သူတွေ့သမျှ ကျောင်းသား နာမည်တွေ အော်ပြော၊ ကျမက ရေးမှတ်ရပါတယ်။ ပြီးတော့မှ နာမည်စာရင်း ကြည့်ပြီး ကျောင်းပြန်တက်ချိန်မှာ ဆော် ပလော် တီးတော့တာပါ။ကျောင်းမှာ စကားမပီတဲ့ ဆရာမ တယောက်ရှိပါတယ်။ "အဲရာဆိုရို့စိရင်" လို့ ပြောတတ်တယ် အမှန်က "အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်" လို့ပြောချင်တာ ပါ။ သူပြောသလို လိုက်တုရင်း ဆရာမကွယ်ရာမှာ ကျမတို့ တိုးတိုး နောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အတော်ကို မကောင်းစားတဲ့ ချစ်စရာတပည့် တွေပါပဲ...။ တခါ ဆရာ လူပျိုကြီးနဲ့ ဆရာမ အပျိုကြီးကို ဖြစ်စေချင်လွန်းလို့ တွန်းပို့ခဲ့တာတွေ၊ ဆရာ့မြင်ရင် "ဆရာ တီချယ့် တွေ့မိလား ဟင်" လို့ မေးတတ် သလို ဆရာမနဲ့ တွေ့ပြန်ရင် လည်း "ဆရာ့ကို ဘယ်နားမှာ တွေ့မိလဲဟင် ဆရာမ" လို့ မသိသလို မေးတတ်ကြပြန် တယ်။ သူတို့ချင်းချင်း လမ်းမှာတွေ့လို့ စကားစမြည် ပြောနေတာ တွေ့မိရင်ဖြင့် "ဟယ် ဆရာ နဲ့ ဆရာမ စကားတွေ ပြောနေကြတယ် တော့" လို့ ကျမတို့ အချင်းချင်း တီးတိုးရင်း အူမြူးမဆုံး ရှိခဲ့ကြပြန်ရဲ့။ နောက်ဆုံးမတော့ သူတို့ ကျမတို့ ဖြစ်စေချင်သလို ဖူးစာ မဆုံခဲ့ ကြပါဘူး။ကျမနဲ့ ပေါင်းတဲ့ ယောင်္ကျားလေး သူငယ်ချင်း ခပ်ဆိုးဆိုး တကောင် ရှိပါတယ်။ သူက ကျောင်းပြေး တော့မယ်ဆို ကျမဆီ သူ့လွယ်အိတ် အပ်လေ့ရှိတော့ တနေ့ ကျမ စာရေးခုံထဲ သူ့လွယ်အိတ် မိသွားလို့ ကြံရာပါ အဖြစ်နဲ့ ကြိမ်လုံးစာမိဖူးသေးတာ။ ဒါလည်းပဲ မမှတ်ပါဘူး၊ သူကျောင်းပြေးရင် လွယ်အိတ်ဖွက်ပေးတုန်းပါပဲ။ ခေါင်းမာတတ်တဲ့ ဥာဉ်ဆိုးက အဲဒီတုန်းကတည်းက ရှိနေခဲ့တာ...ခုတော့ အဲဒီ သူငယ်ချင်းက ဌာနတခုမှာ ပါဝါတော်တော် ရှိတဲ့ကောင် ဖြစ်နေပါပြီ။နောက်တယောက်ကျပြန်တော့ အတော်ကို ပြောင်စပ်စပ်နိူင်သူပါ။ ဆရာမက အစ တတန်းလုံး သူ့ဟာသတွေနဲ့ ရယ်နေခဲ့ရအောင် ပြောင် လွန်း နောက် လွန်းသူ။ သူက ကျမခုံနောက်မှာ ထိုင်ပြီး ကျမ ဆံပင်တွေ ခိုးညှပ်၊ ကျမ ဖိနပ်ဖွက်၊ ဗလာစာရွက်ကို ဆုတ်ပြီး အလုံး သေး သေးလေးတွေ လုံးလို့ နောက်ကနေ ပေါက်လိုပေါက် လုပ်တတ်သူပါ။ သူက ချစ်စရာကောင်းအောင် ဆိုးတတ်သူ သူငယ်ချင်းလေး...တနေ့ သူဖျားပြီး ကျောင်းပြန်တက်တော့ ကျမဆီက မှတ်စု စာအုပ် ငှား၊ ပြန်အပေးမှာ စာအုပ်ကြားထဲ စာညှပ်ပေးပါတယ်။ ကျမက ဆရာမလက် သွားအပ်လိုက်လို့ အဆူခံရတော့ သူစိတ်ဆိုးပြီး ကျမကို ၃-၄ ရက်လောက် စကားမပြောတော့ပါဘူး။ ကျမမှာဖြင့် စာအပေး ခံရတာ စိတ်မဆိုးနိူင်ပဲ သူ့ပြန်ချော့ခဲ့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်း အချစ်လောက် ဖြူစင်တာ မြဲတာ ရှိပါအုံးမလား သူငယ်ချင်းလေးရယ်လို့ ရင်ထဲကနေ ပြောမိခဲ့သလိုပါ...။အဲဒီတုန်းက ကျမစိတ်ထဲမှာ စာကျက်၊ ကစား၊ အစား ဒါပဲ ရှိခဲ့တာလေ။ (တကယ် တကယ် ယုံပေးကြပါ...:)) အစားဆိုလို့ ကျမတို့ ကျောင်းမှာ ကျောင်းတွင်း မုန့်ဈေးတန်း နဲ့ ကျောင်းပြင် မုန့်ဈေးတန်း ၂ခု ရှိပါတယ်။ မနက်ဆို နိူ့ထမင်းသောက်၊ နေ့လည် အသုတ်စား လေ့ ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ အိမ်က ထမင်းဘူး ထုတ်ပေးပါတယ်။ ထမင်းစားချိန်ဆို ကျောင်းအဝင်ဝ တဖက်တချက်က ပန်းခြံထဲ ထမင်း သွားစားတတ်ကြသေး တယ်။ကျမနှစ်ခြိုက်စွာ စားလေ့ရှိခဲ့တဲ့ မုန့် နောက်တမျိုးက ခေါက်မုန့်ကြားထဲ ကပ်စေးနှဲ ညှပ်ထည့်ပြီး တဂျွမ်းဂျွမ်း ကိုက်စားရတဲ့ မုန့်ပါ။ လွမ်းမိတဲ့အထဲမှာ အဲဒီ အစားတွေလည်း ပါပါတယ်။ကျမတို့ကျောင်းမှာ ကျောင်းကား အစိမ်းကြီးတွေရှိတယ်။ အဲဒီကားကြီးတွေက ကျမတို့ ကျောင်းအပြင် ဒဂုံ၃ မိန်းကလေးကျောင်းနဲ့ပါ ပေါင်း ကြိုပေးတာပါ။ မနက် မနက်ဆို ကျောင်းကားအတူ စောင့်ကြရတဲ့အထဲမှာ ကျမတို့နဲ့အတူ မကော်နီလည်း ပါ ပါတယ်။ သူက ဒဂုံ၃က ကျမတို့ထက် အတန်းကြီးပါတယ်။ သူအဆိုတော် မဖြစ်သေးခင်ကပေါ့။တခါတလေ နောက်ကျလို့၊ ကျောင်းကား လွတ်သွားရင် ရွှေတိဂုံခြေရင်း တောင်ဖက်မုခ်ထိ လမ်းလျှောက်ပြီး ၁၀ပြားပေးရတဲ့ နံပါတ် ၁၀ ဘတ်စ်ကြီးတွေ စီးချင်စီး၊ ဒါမှမဟုတ် အဖော်ရှိရင် ကန်တိုမင် ပန်းခြံကနေ ဖြတ်ပြီး ကျောင်းအထိ လမ်းလျှောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ လွယ်အိတ် စလွယ်သိုင်းလို့ စရင်း နောက်ရင်း လမ်းလျှောက်ကြရတာ ပျော်စရာကောင်းလွန်းလို့ တကယ့်ကို မမေ့နိူင်စရာပါပဲ။တခါတခါ ညနေ ကျောင်းကားပျက်လို့များ နောက်တစီး အစားထိုးပို့ပေးတဲ့နေ့ဆို ကျမတို့မှာ ပျော်လိုက်ရတာ။ နောက်တစီးက သူပို့နေကျ အခေါက်ပြီးမှ ဒုတိယခေါက်အနေနဲ့ ပို့ပေးတာ ကိုး။ ဒီတော့ ကျမတို့ ကျောင်းကား တစီးလုံးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ကျမအကြိုက် လွယ်အိတ်ထဲက သားရေပင်ကြိုး ထုပ်၊ အခွင့်အရေးရတုန်း မိုးပျံမတတ် ဆော့ပါတော့တယ်။တကယ်ဆို အဲဒီတုန်းက အချစ်အကြောင်း နားကိုမလည်တဲ့အပြင် ရည်းစားစာပေးခံရရင် ဘရုတ်ကျဖို့လောက်ပဲ တွေးမိတာ။ စာပြန်နော် ဆိုရင် ဘေးနားမှာ ကွင်းစ ကွင်းပိတ်နဲ့ စာပျံနိူင်ဘူး မိုးရွာနေလို့...တို့ ။ သူ့အကြောင်းတွေးရင်း အိပ်မပျော်ဘူး ဆိုရင် အိပ်မပျော်ဘူးလား ရွှေပုပ္ပါး သွေးဆေးကိုစား...တို့ ရေးပြီး ပြန်စာအနေနဲ့ ပြန်ပေး...အဲသလို ပြန်နောက်ခဲ့တာ။ သူများတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးရ ကောင်းမှန်းလည်း မသိသူ ဆိုပါတော့...။ ဒါပေမဲ့ ကျမ အထင်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်ကစားခဲ့ကြတာ နေမှာပါနော် တကယ့် အချစ်စစ် ကြီးတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့...။ခုတော့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး အသက်အရွယ်လေးတွေရ၊ အလုပ်အကိုင် အတည်တကျ နဲ့ အိမ်ထောင်ရက်သားတွေလည်း ကျလို့ ကိုယ်ပိုင် ဘဝတွေထဲ လျှောက်လှမ်းလို့။ တချို့ အချိန်မတိုင်ခင် ကြွေလင့်သွားခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိပေါ့။ အင်းလေ သေခြင်း တရားရဲ့ အချိန် အပိုင်းအဆကို ဘယ်သူက သိနိူင်မလဲနော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိနေကြသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ ကျောင်းသံယော ဇဉ်ရဲ့ တုပ်နှောင်မှုအောက်မှာ ကျောင်းတော်ကြီးအတွက် အမြဲ အသင့် ရှိနေတတ်ကြတာ ကြည်နူးစရာပါလေ...။မျက်လုံးမှိတ်လို့ စိတ်အစဉ်ကို အတိတ်ဆီ စေကြည့်တဲ့အခါ ပုံရိပ် ထင်လာသမျှဟာ ပုံပြင် တပုဒ်လို ဝေဝါးဝါး...။ ဒါပေမဲ့ ပုံပြင် မဟုတ်ခဲ့ ဘူးနော်...တကယ် ဖြတ်သန်းခဲ့ကြဖူးတာ။ တခါတလေတော့လည်း ပေါ့ပါးစေချင်တဲ့ စိတ်နှလုံးက ပုံပြင်တပုဒ်သာ ဖြစ်လိုက်ပါစေတော့ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ တိတ်တိတ်လေး ပင့်သက် ချမိပြန်လေတယ်....သူငယ်ချင်း သက်ဝေရေ...အတွေးများဟာ ဗူးစင်လိုပဲ တစဆွဲရင် တစင်လုံး ပါလာတတ်တော့တာ...ဒါတောင် အရမ်းရှည်သွားမစိုးလို့ တချို့ ချန်ထားခဲ့သေး...
ကျမ....ခဏ ခဏငိုတတ်တယ်....ချော်လဲတဲ့ အခါ....အဖော်ကွဲတဲ့ အခါ....ထမင်းမစားချင်တဲ့ အခါ....အပျင်းဖျားချင်တဲ့ အခါ....အအိပ်ပျက်တဲ့ အခါ....အဆိပ်တက်တဲ့ အခါ....ဝမ်းနဲနေတဲ့ အခါ....အရမ်းလွဲနေတဲ့ အခါ....အချစ်နဲ့ ထိပ်တိုက်ကျတဲ့အခါ....အချစ်အတွက် သိတ်မိုက်ရတဲ့အခါ....အဲသလို အခါပေါင်း များစွာမှာ....ငိုသားကျ လာ ခဲ့......လည်း....ခုထိ အမှတ်နဲတုန်း....ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားတလုံးအောက်မှာအရာရာ ကျမ အတွက် အရှုံး....မပြုံးတတ်ချင်လည်း နေပါစေတော့လေ....။
ဒါလည်းပဲ ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားကို ပသပူဇော်ပုံ နောက်တမျိုးပါ။ သူ့ကိုတော့ ဘုရားပွဲကြီးတွေ ရှိမှ ပွဲမတိုင် ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြပါတယ်...ဝါးလုံးရင့်ရင့် နဲ့ အုန်းလက်၊ နှီး စတာတွေ တွဲဖက် ယက်ဖောက်လို့ တံခွန်တိုင် ပုံစံ ပြုလုပ်ထား တာ တွေ့နိူင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်သူရဲ့ စိတ်ရှည်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့ အဆန်းထွင်နိူင်မှုပေါ် မူတည်လို့ ပုံစံ အမျိုးမျိုး တွေ့ခဲ့ရတယ်...အသေးစိတ် ကြည့်ရင် ဆင်တူမယောင်နဲ့ ထိုးယက်ထားတဲ့ ပုံစံ ကွဲပြားတာ တွေ့ရမှာပါ။ အောက်ခြေကနေ ပခုံးစွန်း အမြင့်လောက်မှာ တော့ အမိုးခုံး၊ အမိုးချွန် ပုံစံအစုံနဲ့ ခိုအိမ်လေး တွေလို တွေ့ရမယ်...အိမ်ကလေး အောက်ခြေမှာ ပန်းပွားလိုလို ဘာလိုလို တွဲရရွဲ ချထား တတ် သေးတယ်.... အနီးကပ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အထဲမှာ သစ်သီးအစုံ နဲ့ ရိုးရာမုန့်တွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်...အဲဒီကနေ ကိုရွှေကားသမား ပို့ပေးတဲ့နေရာကတော့ လှေကားထစ် စိုက်ခင်းတွေဆီကိုပါ....ဘာလီ မြောက်ပိုင်းရဲ့ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက စိုက်ပျိုးရေးလို့ ဆိုပါတယ်...စပါးနဲ့ ကော်ဖီ အစိုက်များကြပါသတဲ့...ကျမတို့လို လူတွေအဖို့တော့ ဒီစိုက်ခင်းတွေက ဘာဟုတ်ပါ့မတုန်း...၊ ရီတာပေါ့...ရီတာပေါ့...ဒါပေမဲ့ တခုတ်တရ လိုက်ပို့ရှာတဲ့ ကားသမား စိတ်ချမ်းသာအောင် စိုက်ခင်းချည်းပဲ ဓါတ်ပုံ ရိုက်လိုက်၊ ပြီးတော့ လူနဲ့လည်း ၂ပုံ ၃ပုံ တွဲရိုက်ပြလိုက် ခဲ့ပါတယ်...(လူပုံနဲ့ရိုက်ခဲ့တာတွေတော့ ဘလော့ဂ်ပေါ် တင်တော့ပါဘူးလေ...စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ချင်သူများ ကျမ e-mail လေးသာ တိတ်တိတ် တို့လိုက် ကြပါတော့...:))မနက်ပိုင်းက လိုက်ပို့တဲ့ထဲမှာ ငွေထည်လုပ်ငန်း ဆီကိုလည်း ပါ ပါတယ်...ဒါက အဝင်ဝပါ၊ အကြမ်းထည် လုပ်တဲ့နေရာ နဲ့ ထွက်ကုန်အချော ပြသရောင်းချတဲ့ နေရာရယ်လို့ ၂ နေရာ ဘေးချင်းကပ် ခွဲထားပါတယ်....အဝမှာ တွေ့တဲ့ အရုပ်တွေက ဘုရင်ရဲ့ ရွိုင်ရယ် မိသားစုလို့ ဆိုပါတယ်...အဲဒီငွေထည်တွေက ပြည်ပပို့ကုန်တွေသာ ဖြစ်တာမို့ အရည်အသွေး လက်ရာလည်း ကောင်း၊ ဈေးလည်းကြီးပါတယ်။ အပြီးသတ် အချောထည်ကို ဓါတ်ပုံရိုက် ခွင့် မပြုတာမို့ ပြုလုပ်နေဆဲ တွေကိုပဲ ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်...များသောအားဖြင့် နားကပ်၊ ဆွဲကြိုး၊ ရင်ထိုး၊ လက်ကောက် နဲ့ လက်စွပ်တွေ ၊ ဆွဲသီးလေး တွေပါ...ဝရိန်ဆော်သူ၊ လွသွားလေးနဲ့ ဖြတ်သူ၊ အရောင်တင်သူ၊ လိုင်းဖော်သူ အစုံပါပဲ...အလုပ်သမားပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ရှိပြီး အလုပ်ချိန်က မနက် ၉နာရီကနေ ည ၁၀နာရီ၊ တပတ်မှာ ၆ရက် အလုပ်ဆင်းကြရတယ် ဆိုပါတယ်...ကျမက စပ်စုလွန်းစွာနဲ့ လိုက်ပြတဲ့သူ (စူပါဗိုက်ဇာထင်ပါရဲ့) ကို သူတို့ တလကို လစာ အနဲဆုံး ဘယ်လောက်ရကြသလဲ မေးကြည့်တော့ သူက ပြုံးပါတယ်...ပြီးမှ သတ်မှတ်ချက်အရ တလကို အနိမ့်ဆုံးလစာ ရူးပြား ၈၀၀,၀၀၀ ရှိရမယ်လို့ ဖြေရှာပါတယ်။အဲဒါတွေ ပြပြီးတဲ့အခါ အချောထည်တွေဘက် ခေါ်သွားပြီး ထုံးစံအတိုင်း ဈေးရောင်းပါတယ်...လက်ထဲကို စကောဝိုင်း သေးသေးတချပ် ထည့်ပေးပြီး ကြိုက်ရာ ကောက်ထည့်သွား ပြီးမှ အထွက်မှာ ပေးရပါတယ်...တပတ်သာ ပတ်မိတယ် ကျမဖြင့် တခုမှ ဝယ်ချင်စိတ်၊ မဝယ်ရ မနေနိူင်ပေါင် ဆိုတာမျိုး မခံစားရတာမို့ မဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ပစ္စည်းတွေက လှပါတယ် ကျမနဲ့ မလိုက်ဖက်တာ ပြီးတော့ ဈေးလည်း များနေတာမို့ပါ...ဒါကိုပဲ ကျမရဲ့ Mr.Nice Guy ကြီးက မျက်နှာပူလှပြီ။ ကျမ အာစေးပေါက်မတတ် လျှောက်မေး ကတည်းက သူက အားနာနေတာလေ။ ဟိုပစ္စည်းလေး တခုယူလာ လိုက်၊ ဒါလေး ဝယ်ပါလား လုပ်လိုက်၊ နောက်တမျိုး ယူလာလိုက်၊ ကျမကိုယ်ပေါ် ကပ်ပြပြီး လိုက်တယ် လှတယ် ပြော လိုက်နဲ့ သူ့မှာ ပျာယာထ နေရောပဲ။ ကျမကလည်း မယူဘူး ဆို မယူဘူးပဲ။ အထွက်မှာ အစောင့် လက်ထဲ ဘာမှ မပါတဲ့ စကောလေး ပြန်အပ်လို့ အားနာပါးနာ တခွန်းတော့ ဆိုခဲ့ပါ တယ်...ဆောဒီး လို့... အမျိုးသားက အဲလိုပါပဲ သူများဖက်က တွေးပေးပြီး အားနာတတ်တာ အလွန်ပါပဲ။ သူက အဲသလို အရမ်းကောင်းနေတော့ သူနဲ့ ယှဉ်လိုက် တိုင်း ကျမမှာ နေရင်းထိုင်ရင်း လူဆိုးမကြီး လုံးလုံး ဖြစ်နေရတော့တာပါ...ဘာလီပိုစ့် မပြီးသေးပါဘူး ဆက်ပါအုံးမယ်...
စောစောစီးစီး အပီ ယူနေကြတဲ့ အဖြောက်နှစ်ယူ..... ဟိုတယ်က မနက်စာ တနေ့ တနေ့ ဘိုစာတွေချည်းပဲမို့ အတော် ပျင်းစရာ...Salad၊ Bacon၊ အသားလုံး၊ ညှပ်ခေါက်ဆွဲကြော် နဲ့ ထမင်းဝါ-သူတို့အခေါ် Yellow Rice...ဗိုက်ထဲပြည့်အောင်တော့ ထည့်ရတာပဲပေါ့ ရသတဏှာရယ် ဘာရယ်လည်း ဟုတ်ပါဘူး...ဆံပင်လေးတွေ ကျစ်ပြီး အပျိုမ စတိုင် သမီးငယ်လေး ချစ်လို့ အသာခိုးရိုက်ခဲ့တယ်မနက်စာအပြီး ၈ခွဲမှာ လာခေါ်မဲ့ကားသမား စောင့်၊ သူလာတော့ ၈:၄၀...တော်တော်လေးမောင်းမှ Kecak & Fire Dance ကြည့်ရမဲ့ဆီရောက်တယ် တော်တော်ကို ပျင်းစရာပါ ဘာလီသွားမဲ့သူများ အချိန်ရှိရင် သွားပါ အချိန်လုသွား ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကို ဖြုတ်ချခဲ့ဖို့ မှာချင်ပါတယ်ဘာကောင်မှန်းမသိ၊ ညာကောင်မှန်းမသိ သူများတွေ ကင်မရာထုတ်ရိုက်တော့ ကျမလည်း ဘယ်နေလိမ့်မလဲ ငါဟဲ့ ဘလော်ဂါ ဆိုပြီး ထရိုက်ပစ်ခဲ့တာ...သူတို့ ဘာလီနီးစ် ဒန်ဆာတွေဟာ အောင်မြင်တဲ့ ဒန်ဆာဖြစ်ဖို့ ၅နှစ် ၆နှစ် သမီးကတည်းက သင်ယူကြရတယ်ဆိုပဲ...တီးလုံးကတော့ ကျမနားထဲ အနိမ့်အမြင့်မရှိ တပြေးတည်း၊ ဒါကိုပဲ ဒန်ဆာတွေက လက်ဖျားလေးတွေ တချောင်းချင်းခါခါပြီး၊ မျက်နက်ဆံ အရွှေ့ အပင့် နဲ့ ကသွားကြတယ်...။ ခက်တာက နှစ်ယောက်ထဲ နဲ့ကို မညီဘူး.... ဇာတ်ကောင် ကာရိုက်တာတွေကတော့ တရုပ် ပြီး တရုပ် ထွက်လာတာပဲ...ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း စာရွက်တွေတော့ဝေတယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူက စိတ်ဝင်တစား ဖတ်မတုန်း...တချို့ ခင်းထိုင်ကြတယ်...အင်း ဘာကောင်တွေမှန်းလည်း မသိ၊ ပြောတဲ့ စကားကလည်း ဟိုက်ဘာလီနီးစ်-High Balinese (သက္ကတဘာသာ Sanskrit ကနေ ဆင်းသက်တယ် ဆိုပါတယ်) ဆိုတော့ ဘာတွေမှန်းကို မသိ အောင်ပါပဲ ထွက်ကြရ အောင် ဆိုတော့ Mr.Nice Guy က အားနာစရာ ကြီး တဲ့....ဖြစ်ရလေ... ။ ဒါနဲ့ ချူချူး သွားပေါက်လိုက်၊ ရှေ့မှာ ဓါတ်ပုံ ထွက်ရိုက်လိုက်၊ ရှေ့ကလူ တွေရဲ့ ခေါင်းတွေ လိုက်ကြည့်လိုက်၊ ရေဗူးသွားဝယ်သောက်လိုက်နဲ့ ကျမဖြင့် ပျင်းလွန်းလို့ လိန်ကျစ်နေရောပဲ....ပြီးသွားပြီဆိုမှ ဟေး ကနဲ...အဲဒီလောက် ပျင်းစရာကောင်းအောင် တီးနိူင်လွန်းတဲ့ ဘဘကြီးတွေကို ထွက်ရိုက်ပစ် ခဲ့တယ် မှတ်ကရော...၃ပုံတောင်...သူတို့ တီးဝိုင်းက အားလုံး ၁၆ ယောက်...အသံက တသံတည်း တတုံတုံ ထွက်နေတဲ့ ဟာများ...မလိုအပ်ပဲ လုပ်အားတွေ ဖြုန်းတီးလွန်းတယ်...အသေအချာကြည့်မှ သူတို့ကိုင်ပြီး တီးနေတာက တူလိုလို ဘာလိုလိုဟာကလေးတွေနဲ့...တွေ့လား ရှေ့က ပတ္တလားလိုဟာကို မတီးပဲ ခေါင်းကို တချက်လောက် ထုကြည့်လိုက်ရင် တောင် သံစဉ်လေး ပြောင်းထွက်လာဦးမှာ...အို ပစောက် ရပင့် ငသတ် ဝစံ္စနှစ်လုံးပေါက် ပျင်း....ပျင်းစရာကြီးပါအေ...ကားသမားရဲ့ ဒက်ရ်ှဘုတ် ပေါ်မှာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ပသမှု တခု၊ ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားကိုပေါ့...အန္တာရာယ်ကင်း၊ ဘေးရှင်း ပြီး လာဘ်လာဘ အတွက် နေ့စဉ် တင်လေ့ရှိသတဲ့...ရှိုးက အထွက် အဝင်ဝက ဘီလူးရုပ်ခေါင်းပေါ်မှာလည်း တွေ့ခဲ့တယ်။ အုန်းလက်ကို ခွက်ပုံချိုးပြီး အထဲမှာ ပန်းတချို့နဲ့ ဘီစကစ်၊ ကွတ်ကီးလို မုန့်မျိုးတွေပါတယ်သွားရင်းလာရင်းနဲ့ ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့တာနဲ့ ထပ်ရိုက်ခဲ့တယ် အဲဒါ ပြန်မဲ့မနက် လေဆိပ်က ဒီအက်ဖ်အက်စ် (Duty Free Shop) မှာ...အောက်ပုံကတော့ ကျမတို့နေခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ရှေ့က ဈေးဆိုင်တန်းတွေ...အဲဒီတနေရာမှာ ဆိုင်တွေက စုပြီးလာပူဇော်ထားကြတာ...ကျမတို့ ဆီက ရွာဦးနတ်စင်လိုပေါ့ သူတို့ဆီမှာ လမ်းထောင့်တွေတိုင်းလိုလိုမှာ ရှိတတ်တယ်...ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ ကျန်ပါသေးတယ် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ရှိပါသေးတယ်...ဖြေးဖြေးပေါ့ ရေးပါအုံးမယ်...
Copyright © 2011 ချစ်ကြည်အေး.